Toy Izao Ny Fandrenesan’Ny Olona Ny Hiran’i Michael Jackson Amin’ny Fiteny Quechua · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Janine Rhyans
Voadika ny 23 Aogositra 2015 5:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Deutsch, Română , Català, Magyar, русский, Aymara, polski, Ελληνικά, Italiano, Español
Teratany Peroviana i Renata Flores Rivera, 14 taona ary nampihetsi-po ny haino aman-jery sosialy tamin'ny fangalàny tahaka hira fanta-daza maro ho amin'ny fiteny Quechua. Noraketina an-tsary tao amin'ny lembin'i Inca ao Vilcashuamán ao Ayacucho, Pero ny lahatsary nanaovany amin'ny fombany azy manokana ny hira “The Way You Make Me Feel”, izay hiran'Itompokolahy Michael Jackson, ary efa maherin'ny atsasaky ny iray tapitrisa no nijeren'ny olona azy io tao amin'ny YouTube.
Ahitàna olona fito tapitrisa miteny azy, ny Quechua no fiteny faharoa (aorian'ny Guarani) be mpiteny indrindra ao Amerika. Ao Pero, efa noraisina ho toy ny fiteny ofisialy izy io miaraka amin'ny fiteny Espaniola, eny fa na dia manodidididina ny 19% fotsiny aza ny vahoaka mahay miteny Quechua.
Miasa ao amin'ny Asociación Cultural Surca (Fikambanana Ara-koltoraly Surca) i Patricia Rivera renin'i Renata, fandaharan'asa iray mikendry indrindra ny fampianarana ireo adolatsento avy any Ayacucho momba ny fisorohana ny zava-mahadomelina sy ny fitenindrazana ao amin'ny faritr'i Andean. Ampahany amin'izany tetikasa izany i Renata. Noho ny Reniny, “lasa miteny Quechua ihany koa ny tanora.”
11 taona izao no niforonan'io fikambanana io ka ny tanjona napetraka ho tratrarina dia ny hanovàn'ny tanora sy ny adolatsento ny fomba fijeriny ka haka hatrany ny lafiny tsara amin'ny alàlan'ny taokanto/zavakanto. Raha ny voalazan'ny gazety El Comercio, dia ny hitahirizana maharitra ny Quechua amin'ny maha-fitenindrazana azy no tanjon'izy ireo.
Amafisin'i Ana Saroly, ao amin'ny lahatsorany “Puede el quechua sobrevivir“ (Mety haharitra ve ny fiteny Quechua), fa ny fiteny Quechua dia lasa fiteny nampiray tamin'ny fotoan'andron'i Inca taloha izay efa 600 taona lasa izay. Ankehitriny, atahorana ny fihenan-danjan'io fiteny io, noho izany ilaina ny hianaran'ny tanora azy io sy hahatsapany rehareha ireo amin'io fiteny io.
Tsara avokoa ny ankamaroan'ireo fanamarihana voaray tao amin'ny takelaka Facebook-n'io mpihira io. Ohatra, hoy i Ricky Anthony Ascoy Valarde hoe:
Mifandefitra avokoa ny tsirairay ary tsy misy ny fanavakavaham-bolon-koditra noho io fitenin-dreninay io. Tokana izy io. Isaorana ianao ry Però noho ny halehibenao.”
Nozaraina tao amin'ny Twitter ny hira iray hafa amin'ny gadona rock somary milantolanto nohirain'i Renata amin'ny fiteny Quechua :
Hiran'ny tarika The Animal mitondra ny lohateny hoe “The House of the Rising Sun” (Ilay Trano ery amin'ny fiposahan'ny masoandro) nindramin'ilay zazavavy Renata Flores Rivera nohiraina tamin'ny fiteny Quechua …
Hiran'i Alicia Keys mitondra ny lohateny hoe “Fallin” no ho hirany manaraka.